baabuur | RayHaber | raillynews
Jidka Berlin wuxuu u muuqday midkii ugu horreeyay "Bursa"!
Soosaarayaasha nidaamka tareenka ayaa ku kulmay carwada 'Uuoroaisa Rail' ee Istanbul. Baabuurkii ugu horreeyay ee laga soo saaro Bursa waxaa la keenay istaagga iyada oo qaybteedii hore modular ahayd. Waxaan halkaas la joognay Duqa Magaalada Recep Altepe. Himiladeeda himiladeeda, waa guul kale oo la taaban karo [More ...]
Tareenka xawaaraha sare ee u dhexeeya Istanbul iyo Antalya ayaa noqon doona saacadaha 4
Ankara iyo Istanbul ayaa sidoo kale ku xidhi doona Antalya tareenka xawaaraha sare ku socda. Laga soo bilaabo Ankara, Konya-Manavgat wadada adoo raacaya saacadaha 2 saac ee 45 si loo gaaro Antalya. Mashiinka 714 oo u dhexeeya Istanbul iyo Antalya 4 saac 30 daqiiqo ayaa la qaadan doonaa. Turkey [More ...]
Tirada gaadiidka tareenka ee Mareykanka ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 5.
25 ee Mareykanka Cabbirka gaadiidka tareenka ee usbuuca dhammaanaya bisha Febraayo wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 5.0. Sida laga soo xigtay xogta ay sii deysay Ururka Wadada Tareenka ee Mareykanka (AAR), 296 kun oo isla isla todobaadki hore [More ...]
20 sannadlowlaha dhaqaalaha Malatya Vagon Repair Factory waxaa la siiyaa dhaqaalaha.
Heshiis wanaagsan oo niyaad leh ”waxaa lala saxeexday shirkad Shiineeys ah oo doonaysay inay maalgashi ka samayso Malatya Wagon Repair Factory, oo muddo sanado ah ku jirtay 20. Buug-yaraha Dunida / Xarunta Malatya Guddoomiyaha Ulvi Saran, muddo ku dhow 20 sano [More ...]
Maaddaama khadka tareenka ee loo yaqaan 'TCDD Köseköy-Gebze' uu xiran yahay, 2 wuxuu fulin doonaa mashruuca lagu qaadayo maraakiibta shixnadaha u dhexeeya Tekirdağ iyo İzmit Derince iyo Bandırma muddo hal sano ah. Maareeyaha Dekadda Tekirdağ Mubin Salter Salt [More ...]
Burundi waxay ahayd kaalinta saddexaad ee shirarka Anatoliyaanka
"Shirarka Turkey 'Star Media Group ayaa lagu qabtay oo ka hooseeya' Impact of Crisis Financial Global, guddiga arrimaha debedda lagu qabtay Bursa iyo Turkey. 2023 ma aha riyo inuu ka mid New Turkey 10 dhaqaalaha ee ugu weyn dunida ee 'ahaan in Shirarka Bursa [More ...]
Dab ayaa ku socday tareenka.
Adeegga tareenka ee Adapazarı-Haydarpaşa ee lagu joojinayo shaqada tareenka xawaaraha-dheer awgiis tareenka Adapazarı ee sugaya gaari rakaab ah oo madhan, wuxuu noqday mid aan caadi aheyn dab xalay. Shalay galab markay ahayd 20.00 [More ...]
"Bursa wuxuu noqonayaa 'saldhig' oo ku saabsan soo saarista baabuurta
Duqa Magaalada Bursa Recep Altepe ayaa yidhi, ”(Bursaray) Kuma qanacsana in la balaariyo khadadka, waxaan hadda ka shaqeyneynaa bixinta gawaarida cusub. Nidaamyada tareenka ee hal dhinac ku socda iyo tramway iyo wax soosaar wagon dhinaca kale ah [More ...]
Tüvasaş ayaa dhammaystiray hannaanka gawaarida ugu horreeya ee Bulgaria.
Turkey baabuur Industry Inc. (Tüvasas), baabuurta raaxada hurdada laga soo saari doonaa, waayo, Bulgaria ayaa dhameystirtay noocooda ugu horeysay. Sidaa darteed, Maareeyaha Guud ee Tareennada Bulgaria Georgi Ivanov oo kooxda uu farsamo ka Turkey, booqo Tüvasas [More ...]
Shil tareen oo xawaarihi sare leh ee Shiinaha: 32 ayaa dhintay
Dadka 32 ayaa dhintey, in kabadan 100 ayaa ku dhaawacmay sida laba gaari oo xawaare sare leh oo laga dejiyay buundada gobolka Ciciang ee bariga Shiinaha. Sida laga soo xigtay wakaaladda Shinhua, koonfur-bari ee Hangcou, oo ah magaalo-madaxda Gobolka Ciciang [More ...]
Ar-Gü waxay iibsatay 20 90 cagaha gawaarida.
Shirkadda gaadiidka tareenka ee Arkas, Ar-Gü, waxay awoodaa inay qaadaan laba weel oo xirmooyin ah oo loo yaqaan '20-foot' isla waqtigaas oo ay la socdaan baabuur cusub oo khaas ah oo 45 ah oo ay soo iibsatay. R & D waa mid ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay tareenka ugu horeysay Turkiga, [More ...]
DM 15 000 Diesel Mototrain Sets
Tareenka furitaanka 1435 mm Bumper to Bumper train dhererkiisu waa 80100 mm Foga udhaxeeya bogie hubes 19000 mm Wagon ballac 2825 mm Wagon dhererkiisa 4050 mm Xawaaraha ugu sareeya ee hawlgalka 140 [More ...]
Gawaarida dhaqdhaqaaqa waa mashiinka uumi ama mashiinka lagu wado in lagu jiito tareenka dadka raacaya biraha. Waxaa laga soo qaatay erayga halbeega Faransiiska. Nidaamyada tareenka, 16. qarnigii, laakiin wadiiqayaasha 200 sano jir xayawaanka [More ...]
Soosaariyaha iyo Taariikhda: Fiat, 1961 Assembly Axle Assembly: 1A'A1 '+ 2'2' + 1A'A1 ′ Awoodda Mashiinka: 580 BG (4 x 145) matoorka asalka ah: Fiat 203.0 / 762 Awood Wareejinta: Xawaaraha sare ee 5 oo leh xajiye hydraulic Xawaaraha: 90 km / saac [More ...]